လစ်ဗျားအစိုးရ လေတပ်စခန်းအား တိုက်ခိုက်မည်ဟု အမျိုးသား စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်က ပြောကြား - Yangon Media Group
လစ်ဗျားအစိုးရ လေတပ်စခန်းအား တိုက်ခိုက်မည်ဟု အမျိုးသား စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်က ပြောကြား
ထရီပိုလီ၊ ဧပြီ ၇
လစ်ဗျားနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း အစိုးရစစ်တပ်များသည် ဒေသတွင်း အုပ်စိုးနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှိ တပ်စခန်းများအား လေ ကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးပမ်း နေသည်ဟု ဧပြီ ၇ ရက်သတင်းများအရ သိရှိရသည်။ ”လေတပ်က နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရှိ တပ်စခန်းများကို ဂျက်တိုက် လေယာဉ် သို့မဟုတ် ဒရုန်းလေယာဉ်များသုံးပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ စီမံထားပြီးပါပြီဟု စစ်တပ်ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ အာမက်အယ်လ်မစ်မာရီက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကာ ပြောဆိုလိုက်သည်။
လွန်ခဲ့သောနာရီပိုင်းအတွင်းက အစိုးရစစ်တပ် ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များသည် ထရီပိုလီမြို့တောင်ပိုင်း စစ်စခန်းများအား ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဒေသစစ်သတင်း ရင်းမြစ်များမှ ဖော်ပြခဲ့သည်။ စစ်ဆင်ရေးအား အမျိုးသားစစ်တပ် ခေါင်းဆောင် ခါလီဖာဟပ်ဖ်တာ က ဦးစီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခါလီဖာဟပ်ဖ်တာသည် ၂ဝ၁၁ ခု နှစ်က လုပ်ကြံခံရ၍ သေဆုံးခဲ့ရသူ လစ်ဗျားအာဏာရှင် ကဒါဖီအပေါ် သစ္စာရှိသူတပ်မှူးတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အ တွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူ အန်တိုနီယို ဂူတာရီးစ်က လစ်ဗျားနိုင်ငံအတွင်း နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့များ စစ်ရှိန်မြှင့် တိုက်ခိုက်လာခြင်းကို စိုးရိမ်ပူပန်မိ ကြောင်း ဧပြီ ၅ရက်က ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့သည်။
မန္တလေးမြို့အတွင်း အဓိကလမ်းမကြီးများတွင် ကောက်ခံနေသော ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံခွင့်များ စည်ပင်
မကွေးမြို့ပေါ်ရှိ လမ်းများကို စည်ပင်မှ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူများမှ ၄ဝ ရာခို?
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှု စွပ်စွဲခံ ဇေယျာဖြိုး ၏ စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ဦးကို လိုပြသက?
ပဲလေ့စ်နှင့်ပွဲက ဒိုင်လူကြီး၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် နည်းပြဆိုးလ်ရှား ဝေဖန်ခဲ့
ပြည်နယ်အတွက် နစ်နာချက်ကို လွှတ်တော်တင်ခြင်း အပေါ်ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းသည်ဟုဆိုခြင်းမှာ သဘာဝ မက